DEG DEG: Rikoor fantastik ah ayaa laga Diwaangaliyey
Cunugga Manchester City ayaa rikoor cusub u dhigay kooxda ka dhisan garoonka Stamford Bridge.
Manchester City, oo ay dhaawac ka soo gaadhay dhaawaca Korona Fayra ee shan ciyaartoy, ayaa awooday inay hoggaanka 2-0 ku qabato 35-kii daqiiqo ee ugu horreysay ee ay ku ciyaareysay garoonkeeda Chelsea.
Ilkay Gundogan ayaa hogaanka u qabtay 18 daqiiqo markii ay ciyaarta socotay, iyadoo Phil Foden uu ka soo jabay dhanka bidix isla markaana uu toogtay 1 – 0 wax yar uun ka dib gaadhitaanka goolhayaha fidsan.
Ciyaaryahan Phil Foden ayaa seddex daqiiqo ka dib daqiiqadii 21aad ee ciyaarta u labeeyay kooxda Chelsea.
Kooxda martida loo ahaa ee Chelsea ayaa markaa isku dayday inay ka soo kabato labada gool ee laga dhaliyay oo ay weerareen daafacyada, laakiin kubbada ayaa birta ka booday waxaana badbaadiyay Raheem Sterling. Nasiib darrose, kubaddu waxay ku dhacday birta, laakiin Kevin de Bruyne ayaa ku celiyey 3-0.
Ciyaarta waxaa dhigay rikoodh uu dhigay da, yarka Phil Foden kaas oo noqday xiddigii ugu yaraa ee gool ka dhaliya chelsea iyo mid kale oo caawiye ka ahaa kulan premier League ah ilaa bishii September 2002.
Cagta, oo ahayd 20 iyo 220 maalmood, waxaa ka horreeyey Jermaine Defoe bishii Sebtember 2002, kaasoo u dhaliyey 19 gool 36 kalena caawiyey Chelsea.
Diogo Jota, Joel Matip, Virgil van Dijk Iyo